အလုပ်ကြိုးစားလွန်းတဲ့ကိုရီးယား အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ – Trend.com.mm
Posted on June 2, 2020 June 2, 2020 by Mya Thet
များသောအားဖြင့် အမျိုးသားအနုပညာရှင်တွေက အလုပ်ပိုများကြတယ်ဆိုပေမယ့်လည်းအခုပြောပြမယ့် အနုပညာရှင်တွေကလည်း အလုပ်ကို နားရက်မရှိ ကြိုးစားနေကြသူတွေပါ။အခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ K-Drama ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
၁) Park Shin Hye
မင်းသမီးချော Park Shin Hye ကတော့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက K-Drama ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၇ မှာတော့ ခေတ္တအနားယူခဲ့ပါတယ်။
2007: Prince Hours
2010: High Kick Through the Roof (Cameo)
၂) Park Min Young
၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက K-Drama ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ Park Min Young youngပါ။ သူမကတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကစလို့ K-Drama ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်မမှာတော့ ခေတ္တနားခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေကတော့
2006/2007: Unstoppable High Kick
2008: Hometown of Legends
2009: Ja Myung Go
2014: A New Leaf
2017: Queen for Seven Days
2018: What’s Wrong with Secretary Kim
2020: When the Weather Is Fine
၃) Son Ye Jin
လတ်တလောမှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့ Crash Landing on You ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသမီး Son Ye Jin ကတော့ K-Drama ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကတည်းက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ မှာတော့ ခေတ္တအနားယူခဲ့ပါတယ်။
2001: Delicious Proposal
2002: Great Ambition
2006: Alone in Love
2007: Yobi, the Five Tailed Fox (Voice actress)
2010: Personal Taste
2013: Don’t Look Back: The Legend of Orpheus
2015: Bad Guys Always Di
2016: The Truth Beneath
2018: Something in the Rain
2019/2020: Crash Landing on You
၄) Kim Yoo Jung
ချစ်စရာမျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီး Kim Yoo Jung ကတော့ K-Drama ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းက ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာတော့ ခေတ္တအနားယူခဲ့ပါတယ်။
2004: Freezing Point
2006: Princess Hours
2007: Rainbow Eyes
2008: Painter of the Wind
2013: Golden Rainbow
2014: Secret Door
2015: Angry Mom
2017: Because I Love You
2018: Clean with Passion for Now
2020: Backstreet Rookie
၅) Kim So Hyun
နန်းတွင်းဇာတ်လမ်းလေးတွေကို ရိုက်ကူးလေးရှိတဲ့ မင်းသမီးချောလေး Kim So Hyun ကတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက K-Drama ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။
2006: Ten Minute Minor (Drama City)
2007: A Happy Woman
2008: My Name Is Pity (Short film)
2013: I Can Hear Your Voice
2015: Who Are You: School 2015
2016: Hey Ghost, Let’s Fight
2017: The Emperor: Owner of the Mask
2019/2020: Love Alarm
၆) Kim Ji Won
မျက်နှာသေးသေးလေးနဲ့ ချစ်စရာမင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကနေစပြီး K-Drama ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ ခေတ္တအနားယူခဲ့ပါတယ်။
2011: High Kick: Revenge of the Short Legged
2012: To the Beautiful You
2013: The Heirs
2015: Hidden Identity (Cameo)
2018: Detective K: Secret of the Living Dead
2019: Arthdal Chronicles
၇) Yoo In Na
သူမကတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက K-Drama ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ ခေတ္တအနားယူခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမပါဝင်ရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေက အခုထိလဲ အောင်မြင်နေဆဲပါနော်။
2009: High Kick! Through the Roof
2011: The Greatest Love
2012: Queen and I
2013: You Are the Best
2015: The Secret Message
2016: One More Happy Ending
2018: Top Star U-back (Cameo)
2019: Touch Your Heart
2020: Mr. Zoo: The Missing VIP (Voice actress)
၈) Jung So Min
သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းတဲ့ မင်းသမီးချော Jung So Min ကတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကနေစပြီး K-Drama မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင် သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေက အတော်လေးကို အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေဆဲပါ။
2013: Came to Me and BecameaStar (Drama special)
2016: The Sound of Your Heart
2017: My Father is Strange
2018: The Smile Has Left Your Eyes
2019: Abyss (Cameo)
2020: Soul Mechanic
၉) Lee Sung Kyung
မင်းသမီး Lee Sung Kyung ကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက K-Drama ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။
2014: It’s Okay, That’s Love
2015: Flower of Queen
2016: Cheese in the Trap
2017: Trolls (Voice actress)
2019: Miss & Mrs. Cops
2020: Dr. Romantic 2